IBhunga lezoKhenketho eliGcinekayo elizweni liphela liyayiqonda iMigangatho eLungileyo yokuFikela eNorway
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Xanduva » IBhunga lezoKhenketho eliGcinekayo elizweni liphela liyayiqonda iMigangatho eLungileyo yokuFikela eNorway
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseNorway zokuPhula • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
IBhunga lezoKhenketho eliZinzileyo leHlabathi (i-GSTC) linovuyo ukubhengeza ukuba uMgangatho oFanelekileyo wokuFikela eNorway uzuze inqanaba le-'GSTC-eliQatshelweyo '.
Umgangatho wobume bendawo ozinzileyo waseNorway uquka iikhrayitheriya ezingama-45 kunye nezalathi ezili-108 eziza kulinganiswa, zibhaliswe kwaye zibekwe esweni. Umgangatho ubandakanya indalo, inkcubeko, okusingqongileyo, amaxabiso entlalo, ukubandakanyeka kwabahlali kunye nokusebenza kwezoqoqosho. Umlinganiso kunye nophuhliso oluqhubekayo luyaqinisekiswa ngokubalwa kokusebenza kunye nokuhlaziya uphawu rhoqo kwiminyaka emithathu.
Ukufezekisa ubume obuchongiweyo be-GSTC kuthetha ukuba umgangatho wokhenketho ozinzileyo uphononongwe ziingcali zobuchwephesha be-GSTC kunye nePhaneli yokuVunywa kwe-GSTC kwaye yathathwa ilingana ne-GSTC Criteria yokhenketho oluzinzileyo.
Ukongeza, umbutho ohlangabezana neemfuno ze-GSTC kufuneka ulawule umgangatho. Ukwamkelwa kwe-GSTC akuqinisekisi ukuba inkqubo yokuqinisekiswa inokwethenjelwa, kuphela ukuba iseti yemigangatho esetyenzisiweyo yokuqinisekisa ibandakanya ezona zinto zincinci zokuqinisekisa uzinzo. Injongo yeenkqubo ze-GSTC kukuvuza abasebenza ngokunyanisekileyo kukhenketho oluzinzileyo, oluthi emva koko lwenze ukuzithemba kunye nokuthembeka kubathengi.
"Ukuzinikela okukhulu kwisikimu sophawu 'Indawo eziGcinekayo' kubonisa ukuba indawo zokhenketho zaseNorway ziluthathela ingqalelo uphuhliso oluzinzileyo. Ngokusebenzisana namanye amacandelo oshishino noomasipala, ishishini lezokhenketho linokuba negalelo elihle ekuxabiseni indalo nemisebenzi kwalapha ekhaya ”utshilo uTorbjørn Røe Isaksen, Umphathiswa Wezorhwebo Nemizi-mveliso waseNorway. "Ukwamkelwa komhlaba jikelele komgangatho osetyenzisiweyo kwisikimu sethu sokubeka uphawu kuqinisekisa inqanaba eliphezulu lomsebenzi".
“Siyazingca ngokuba neNdawo eNtsha yokuGcina iNdawo yaseNorway yokujoyina iqela elikhethiweyo lemigangatho eyaziwayo ye-GSTC. I-Innovation eNorway iyinkokeli ekuphakamiseni uzinzo kwezokhenketho nakumanye amacandelo amaninzi kwinqanaba lesizwe, inika umzekelo omhle kwabanye ukuba balandele, utshilo uLuigi Cabrini, uSihlalo weGSTC.
Nje ukuba indawo ekuyiwa kuyo ikhethwe, iNorway eNorway isebenzisa umgangatho ngothotho lokuphunyezwa kunye neendlela zokubeka iliso. Emva koko, isigqibo esisibophelelo senziwa libhunga likamasipala lokuxhasa uphuhliso oluzinzileyo kukhenketho kwaye izibophelelo ezifanayo zenziwa ngabasebenza kwezokhenketho. Emva koko, ukuphunyezwa komgangatho kunokwenzeka. Oku kubandakanya imisebenzi enjengokuseka uthutho lwangaphakathi, amanyathelo okonga umbane, ukutya kwendawo kunye neeprojekthi zenkcubeko, imiqondiso kunye nokwakha iindlela zolonwabo. Ngokudibeneyo, inkqubo yokubeka iliso iyenzeka ebandakanya ukubhala konke ukusetyenziswa kwendawo, inkcubeko yendawo, amandla, ukuveliswa kwenkunkuma, kunye neeasethi zenkcubeko kwindawo ekuyiwa kuyo. Yonke le nkqubo ithatha malunga neminyaka emibini.
Ukuza kuthi ga ngoku, imigangatho yokufika eyi-10, kunye neehotele ezingama-30 kunye nemigangatho yabaqhubi bezokhenketho ifikelele kwinqanaba elaziwa nge-GSTC. Ukugqitywa kwezi nkqubo zobulumko kunika umvuzo kubanini bemigangatho ngokuzimisela kwabo kuzinzo lo gama kunika imarike ubungqina bokuba le migangatho iyabambelela kwimigaqo yelinye ilizwe.
I-GSTC iya kuqhubeka nokusebenza nemibutho kwihlabathi liphela ukubonelela nge-GSTC Ukwamkelwa kwemigangatho yozinzo kukhenketho. Ukwamkelwa kwe-GSTC akuqinisekisi ukuba inkqubo yokuqinisekiswa inokwethenjelwa, kuphela ukuba iseti yemigangatho esetyenzisiweyo yokuqinisekisa iyalingana ne-GSTC Criteria.
Abanini bemigangatho eyaziwayo ye-GSTC bayakhuthazwa ukuba bagqibezele inkqubo yoQinisekiso enxulumene nomgangatho kunye nokungathathi cala kwinkqubo yabo yokuqinisekiswa. Ukufezekisa ubume obuvunyiweyo be-GSTC kuqinisekisa ukuba inkqubo yabo yokuqinisekisa ilandela imigangatho ephezulu yamazwe aphesheya ngelixa ikwahlula imigangatho kunye neenkqubo zabo phakathi kwezinye iinkqubo zokuqinisekisa.